Internal Server Error - Page 11 - General - Somali Forum - Somalia Online
Jacyl bro, saaxiib calan-ka laftigiisu is so beautifull. Cant u see the blue head scarf with the beautifull,blue flag printed on those chubby,sweet cheecks Mmmm Masha Allah ma cid lala simaa jira . Mida kale qof wayn maaha qoftani dee. SOL dumar-ka ku jiroo dhan ayaa ka wayn. Meeshan dadku waa wada 18 jir huh!
mayee inantu ma wayna ee in ay dacas isla dhacday uun baa la moodaaye
waar niyow aniga wixii gaboobay oo dhan waa a igu diray ,, markaa calankaasi wuu ila fool xun yahay ,,,,, wixii cusub caalamkaa jecel markaa kaygaan ka jecelahay imika ,,,,,
Nin Waliba tuu calmado
Waw Cambara Luule
Bal waxaad shirka mar walba keenysid eeg. Waar anigu haddaan adiga ahay waan is qarin lahaa. Markii hore sawir ( too scarry ah ). Hadda laakiin ( after all waa gabadh Somaliyeed) Inantu way qurux badantahay laakiin dharka iyo calan-ka ay sidato marka ( Ashahaadada laga reebo ) Ma qurux badna.
iska qiro inaad indho daraandartay niyow ,,,,
I'm sure inaad iyada iyo calankaba isku qaadan lahayde
Originally posted by Hunguri:
Mmmm Masha Allah ma cid lala simaa jira
Saan u mushxaradooyo lee hadaa maqlileheed...I think SOL aaba ka dhex maqli kartaa...lulu luluuuuuu oluluuuuuu...Anaga alaabahan Ciraaq iyo Talyaaniga calamadooda oo la'isku darsaday i dhaafi...Gadaal ka gaaraa goobtiim dumiyay, soo lama dhihi jirin horta?
looooool,,, KK, FYI calankan buluuga ah waa la bedelayaa maalin dhow ,,,,
^FYI, Ciraaq iyo Talyaaniga lee ka soo tali...
been baad moodaysaa ,,,,,, i'm serious ,,, waa la bedelayaa
loooool@ Kool Kaat, ninkan Jacaylbro waa dhagga xidhanyahay. Waaryaahee saaxiiboow laba calan oo laysla meel dhigi karo maaha. Nagadaa muranka iyo qarjajacda Imagine a light blue sky clour with the white star. Wallaahi, the designer of Somalia flag must have been so geniouse. Nagadaa niyow alaabtan waa runteed Kool Kat waxaad moodaa ranji laysku wada qooshay looool.
Waxaad tidhaahdaa dag dag ayaanu ku design garayny calanka. Laakiin dib ayaa laga saxayaa loool
calanka kii desgn gareeyay isagu muu allifin ee USA buu ka keenay ,,,,,,, sheekada waatii la ogaaday niyow
USA does not have a blue flag with the white star. In fact, its more color oriented like yours. Thought, waligy aanan arag. Green,red, white isku dhex jira. Waar I am bouncing to work will talk to you later insha Allah saaxiib. By the way, Kool Kat nin-kan waa dawakhsanyahaye cashar kusii akhri lol
shaqo wacan niyow ,,,,,,,,,, bal ha habsaamin
Hunguri, iska daa niyadaa uu ku dhisanooya...Abuu jacburis lee iga dheh calanka, kakab kamaa kakab waaxid...Calan maashee...And yea, Adeerkey alifay calanka Somalia was a genius, no doubt...But I can't say the same for Sheekha calakuu meesha lasoo istaagay kii alifay...looooool...
Sheekha, seexadee anigu maanjecli inaad dhafartee...
looooooooool ,, may be anigaa allifay kan dee
Waan seexan lahaaba laakiin runtii madaxaa i xanuunaya so i can't ,,,, i'm taking Panadol then i'll be a dead horse soon IA
^Waadh ha'iga dhaman waa ku sidee...Waan iska fahmay adiga ama mid adoo kale ah inuu alifay...